» Caafimaadka galmada
In badan oo aqristayaasheena ayaa ka qajila ka hadalka heerka faa`idada caafimaad ee ay leedahay xariirka galmoosho ee labada lamaane , hadaba waa kuwaan faa`idooyinka laga helo galmada .
faa`idada caafimaad ee ugu horeeysa ee laga helo galmada waxa ay tahay waxa ay yareneysaa cadaadiska dhiigga sidoo kale neerfo xanuunka ayay yareyneysa sida lagu sheegay baaritaan ay sameyeen quburo u dhashay dalka Scodland oo ku taqasusay aqoonta “Biological Psychology”
Waxa ay intaa raaciyeen in galmada macaan ee dhex marta labada lamaane in ay yareneyso sidoo kale wel wel-ka iyo dhiigga karka saa`idka ah .
Sidoo kale baarayaal kale ayaa isla gartay in galmada ay jirka siiso difaac uu isaga celin karo sida qaboowga iyo noocyada Infection-nada iyadoo ay qubaradaas natiijadaas ka heleen dheecanaada ku jira afka ee loo yaqaan Wilkes .
Sidoo kale galmada ayaa u wanaagsan dheef-shiidka iyadoo galmo macaan oo dhex marta labada lamaane muddo u dhaxeysa 20-ilaa 30-daqiiqo ay keeneyso in si wacan u dheef shiidmo cunadii iyadoo sido kale gubeysa 85-heer kulka cunaadii caloosha gashay .
Inkastoo ay jirto oraah qaldan oo oraneysa galmada oo la joogteyo waxa ay soo dadajisaa wadno xanuun ayaa quburo ingiriis ah sheegayaan in galmada ay u wanaagsan tahay shaqada wadnaha uu qabto sida ay ku sheegeen baaritaan ay sameeyeen oo ahaa Epidemiology and Community Health”.
Sidoo kale galmada ayaa labada lamaane ka dhigeysa kuwo wax ku ool ah oo wax qabad leh sida lagu sheegay baaritaanyo fara badan Galmada ayaa xoojisa kalgaceylka labada lamaane , waxaana ku jira galmada hormone la yiraahdo hormone-ka Jaceylka(Oxytocin) iyadoo hormone-kaan yahay mid dhaliya in labada lamaane isu dareemaan baahi galmoosho.
Baaritaan kale ayaa sheegaya in galmada ay yareyso xanuunada sida madax xanuunka , goon jabka,(madax oo hal dhinac ka xanuuna), xanuunada ku dhaca kala goosyada ,waxa ayna natiijadaan ku soo baxday baaritaan noociisu ahaa Bulletin of Experimental Biology and Medicine.
Xanuunka Prostate ayay sidoo kale yareysa galmada , xanuunkaasi oo inta badaan ragga ay ka sheegtaan , waxaana natiijada baaritaankaan uu ku soo baxay “British Journal of Urology” International”.
Galmada ayaa ka qeyb qaadata in labada lamaane ee weerarka sariirta sameeyay ay heleen hurdo caafimaad leh maadama jirka uu soo daayo hormone-ka ah Oxytocin)kaasi oo ka qeyb qaata in la helo hurdo macaan oo caafimaad leh .
Anonymous10/04/2011qubo maxaa English lagu yiraahdaaa?waad mahadsan tihiinReplyDeleteRG10/05/2011Qubo wuxuu soo hoosgalayaa magacan english guud ahaanSea TurtleReplyDeleteAnonymous12/10/2011asc walaal galmo maku sameyn karnaa biyo dhexdiisa macnhaha baraagta qabeyska anagoo ku jirna wax dhib ah ka imanaayo miyaa malaga yabaa in siilka biyaha ay galaa ii walaal waxii kale alla ku baray noo soo sharax insha allaah thanksReplyDeleteRG12/11/2011wax dhib ah ma laha ninka iyo xaaskiisa inay biyo dhexdooda isugu galmoodaan laakin waxaa shardi ah in gurigooda ay tahay sheekada aysan ahayn meel bannaan ahReplyDeleteAnonymous12/12/2011asc walaal waad mahadsantahay waa sax waaa gurugeyna laakin waxaan ka shakinay iney naagta biyaha siilka ay ka galayaa iyo in kale.ma waxaad leedahay biyaha magalaayaan miyaa waxne uma dhibeyso haddey uur yar leedahay xitta thanskReplyDeleteAnonymous3/07/2013ASC WALAL ADOO RALI AH WAXAN KU WEYDIINAYA WAXA I XANUUNAYA MINKA DHINACIISA MIDIG DHAQTARKA MARKAN LAKULMAYNA WUXUU IDHAHAY MEELNA WEY KU BARARSANTAHAY DHINACNA WAXA KAGA JIRA BIYO OO MINKA DHINACIISA AH MARKA WAXAN DRKA WEYDIIN LAHAA MAXAA SABABA XANUUNKAS INAAN UUR YEESHANA MASUURTAGALBAA MISE WAX MA UDHIMAYSAA INAAN UUR YEESHO FADLAN ISOO JAWAABA ReplyDeleteAdd commentLoad more...